ဒါဟာသင့်လျော်သောဂီတအောက်မှာသင်တန်းကိုပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနေသည်။ စနစ်တကျရွေးချယ်ထားသည့်စည်းချက်အပေါ်ရွှေ့ဖို့နှင့်နှေးကွေးမအားကစားသမားကူညီပေးသည်ပေးသောအပိုဆောင်းလှုံ့ဆော်မှုတစျမြိုးဖွစျသညျ။ ဒါဟာလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်နှင့် reproduced ဂီတ၏အရည်အသွေးမြင့်မှာဖြစ်လတံ့သော, အားကစားအဘို့အညာဘက်ကစားသမားရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အဆိုပါကစားသမား၏အရွယ်အစား။ က flash မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ mp3,-player ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုသို့သောပစ္စည်းကိရိယာများ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ရပါမည်။ ထိုသို့သော devices တွေကိုအားသာချက်များစွာရှိသည်: ပြန်ကျော့ရပ်တန့်ဘဲ, အ player ကိုလှုပ်ခါရန်မကြောက်သည်နှင့်စွမ်းအင်နိမ့်ဆုံးစားသုံး။ ဝယ်ယူသောအခါ, ကဒ်ကိရိယာအစုံအတွက်ကြောင်းသေချာပါစေ။
playback အရည်အသွေးကို။ ဒီစံနှုန်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအရေးအပါဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တက hard disk ကိုနှင့်အတူအားကစားများအတွက်က MP3 player ကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်သည်တန်ဖိုးလျော့နည်းထက် 1 GB အထိမဖွစျသငျ့သညျ။
စွဲစေနည်းလမ်း။ အတော်ကြာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်: လည်ပင်းတဝိုက်ကိုကြိုးပေါ်တွင်အဝတ်အပေါ်ကိုပြုပြင်တာတွေများအတွက် clothespin အပေါ်တိုင်အောင်, လက်သို့မဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် mounting များအတွက်အမှု၌တည်၏။ ဒါဟာကစားသမားပေါ်တွင်တင်နှင့်အချို့သောခုန်သို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် လေ့ကျင့်ခန်း ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့။
အားကစားများအတွက်ဂီတ Player ကိုများအတွက်နားကြပ်။ သူတို့ကအဆင်ပြေနှင့်ကောင်းမွန်သောအသံက insulator တွင်လည်းနှင့်အတူဖြစ်သင့်သည်။ သင်တန်းအခန်းထဲမှာအဘို့ထိုသူတို့အသေးကြောင့် In-နားကိုနားကြပ်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပြီး, ရော်ဘာအကြံပေးချက်များဆူညံသံဆန့်ကျင် insulator တွင်လည်းသည်။ အဆိုပါဝါယာကြိုးများချည်နှောင်ခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြိုးအရှည်ထက်ပို 1.2 မီတာမဖွစျရမယျ။
ဝါယာကြိုးမပါဘဲကစားသမားများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောအရာ - အားကစားများအတွက်အကောင်းဆုံး option ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆိုအရ သင်တန်းပေးခြင်း ။ သင်လေ့ကျင့်ခန်းကြားဖြတ်မပြောဘဲ device ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်အဖြစ်လည်းအပုဒ်အကူးအပြောင်းနှင့်အသံချိန်ညှိအာရုံစိုက်သောမျက်စိကန်းသည်။
အားကစားဘီယက်သလွန် - ဘီယက်သလွန်အတွက်အမျိုးအစားများနှင့်ပြိုင်ကား၏စည်းမျဉ်းများ
Aerotruba - ဘယ်လို aerotrube အတွက်ပျံသန်းဖို့?
စကိတ်စီးခြင်း - စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်
ဒူး၏ဒဏ်ရာ - ပထမဦးဆုံးအကူအညီ, ကုသမှု၏ရှေးရိုးစွဲနှင့်ရိုးရာနည်းလမ်းများ
ရှူရှိုက်မိပါ nebulizer ကလေးများစိုစွတ်သောချောင်းဆိုး
ကနျြးမာရေးအတှကျအပဌနာ - ကဘာလဲ?
မီးဖို၌ buns အဘို့မုန့်စိမ်း
ပျားရည်ကိတ်မုန့် "Little ကအနီရောင်" - စာရွက်
စက္ကူထဲကကြောင်တစ်ကောင်စေရန်မည်သို့ - ကလေးတွေအဘို့လက်မှုပညာ
အဆိုပါကလေးသည်တစ်လထက်ပိုပြီး coughs - ဘာမျှမကူညီပေးသည်
Black ကမှော် - သေခြင်းတရားကရှင်းလင်းပြောပြ
Brad Pitt ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်အပေါ်ခရိုအေးရှားအတွက်ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းတည်ဆောက်လိမ့်မယ်
Pangasius - ကယ်လိုရီ
ကြောင်အတွက်နားကိုသွင်း - ကုသမှု